Gaalkacyo: Hoggaamiye dhaqameedyo dhalleeceeyay dhacadadii shalay, isla markaana ku baaqay adkaynta amniga. – Radio Daljir
Gaalkacyo: Hoggaamiye dhaqameedyo dhalleeceeyay dhacadadii shalay, isla markaana ku baaqay adkaynta amniga.
Galkacyo, April 28 – Beesha Leelkase oo ka mid ah beelaha deggan gobolka Mudug, qayb ahaanna loo tirinayey ku lug-lahaanasha rabshaddii shalay galab ka dhacday xaafadda Garsoor ee dhimashada iyo dhaawac gaystay ayaa maanta shir ay waxgaradkoodu iskugu yimaadeen ku muujiyey sida ay uga xun yihiin dhacdadaasi.
Xubnaha kale duwan ee beeshaasi ee maant shirka qabtay oo iskugu jiray nabaddoonno, cuqaal dhaqan, culimo-awdiin iyo waxgarad aad u tiro badnaa ayaa si faahfaahsan uga xog-warramay mawqifkooda ku aaddan iska-hor-imaadkii shalay xaafadda Garsoor ka dhacay. Falkaas ayay ku tilmaameen in uu ahaa mid meel-ka-dhac ku ahaa sharafta ummadnimo iyo sidoo kale amniga iyo nabadda intaba, ayna aad uga xun-yihiin, isla markaana ay diyaar u yihiin sidii loogu guntan lahaa wax-ka-qabashada ciddii maleegtay.
Dhinaca kale, cuqaal-dhaqameedu, waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadal-haymo sheegayey jiritaan iyo joogista xaafadda Garsoor xubno ka tirsan ama xiriir la wadaaga ururka Al-shabaab, taas oo ay ku micneeyeen in ay tahay haddallo aan sal iyo raad toona lahayn, loogana golleeyahay ujeeddooyin gurracan iyo afkaar dhinac marsan danaha dadka reer Puntland.
Shirkaasi waxaa lagu caddeeyey si weynna loogu celceliyey dadka gobolka Mudug iyo guud ahaanba dadka reer Puntland in ay yihiin dad ehel ah oo walaalo ah, wadaagana wanaag iyo wada-dhalasho aan la gooyn karin, sidaas darteedna loo baahan-yahay in ay ka waan-toobaan waxkasta oo horseedi kara nacayb iyo kala fogaansho dhaxdooda, si wadajir ahna uga shaqeeyeen dantooda ummadnimo, diidaanna iska-hor-keeniddooda.
Markii shirkaasi uu soo gaba-gaboobay ayaa waxaa war-muriyeedkii laga soo saaray warbaahinta u ukhriyey nabaddoon C/llaahi Siciid Warsame ”Kaytoon’ iyo nabaddoon Xuseen Maxamuud Xirsi ‘Guray’ oo labadooduba ah nabaddoonno caan ah, kuna hadlay magacigii shirkaasi maanta.
Shirkaan odayaasha iyo waxgarka beesha Leelkasse oo ka dhacay hotelka Kaah ee magaalada Gaalkacyo ayaa yimid xilli shalay galinkii danbe magaalada Galkacyo uu ka dhacay iska-hor-imaad hubaysan gaystayna khasaaro dhimasho oo gaarsiisan illaa 6 ruux iyo dhaawac tiro kale oo intaas le’eg, taas oo dhinac ahaan wax laga saarinayey dhallinyaro ka tirsan beesha maanta waxgaradkeedu ay cambaareeyeen rabshaddaasi.